व्यापार – Manakamana Media
जनसम्पर्क समिति कुवेतको जागरण अभियान सम्पन्न,
3 weeks ago	व्यापार 0
जनसम्पर्क समिति कुवेतको जागरण अभियान सम्पन्न, २५ जनालाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान कुवेत, २९ जुन : नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिको जागरण अभियान शुक्रबार कुबेतको जिलिबस्थित पपिन्स हलमा भब्यरूपमा सम्पन्न भएको छ। “राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र हाम्रो आदर्श, आजको आवश्यकता हो।” भन्ने नारा बोकेर जनसम्पर्क कुवेत शाखाले उक्त …
January 26, 2019	भिडियो, मनोरन्जन, व्यापार, समाचार 0
वालिङ महोत्सवको सातौं संस्करणको तयारी पूरा भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ र वालिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको महोत्सव माघ १७ देखि २८ गतेसम्म वालिङ खेल मैदानमा हुने छ । कृषि, पर्यटन तथा व्यापार अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ दुई–दुई वर्षमा महोत्सव आयोजना गरिन्छ । यस पटक पनि कृषि तथा हस्तकला प्रदर्शनी, …
नियम र कार्यविधि स्पष्ट नभएपछि रोकियो विदेशी लाइसेन्सको नेपालीकरण
January 22, 2019	राजनितिक, व्यापार, समाचार 0
विभिन्न देशले जारी गरेका सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) नेपालीकरण गर्न भन्दै दैनिक एक सय हाराहारी सेपाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना पुग्छन् । तर, कार्यालयले भने नेपालीलाई बन्द गरेर विदेशीलाई मात्रै सेवा दिइरहेको छ । लाइसन्स नेपालीकरणका लागि पुगेका सेवाग्राही ‘स्पष्ट नियम र कार्यविधी छैन’ भन्ने जवाफ सुनेर फर्किन्छन् । सवारी …
रोजगारीका लागि जापान लग्ने भन्दै २६ जनालाई ठगेर एजेन्ट फर
January 17, 2019	व्यापार, समाचार 0
रोजगारीका लागि जापान लग्ने भन्दै २६ जनालाई ठगेर एजेन्ट फरार सुर्खेत । जापान पठाइदिन्छु भन्दै सुर्खेतको २६ जना ब्यक्तिहरुसँग प्रति ब्यक्ति १ लाखका दरले २६ लाख रुपैयाँ लिई बुटवल ५ सेमलारका गुरु प्रसाद चालिसे फरार भएका छन् । वेरोजगार युवाहरुलाई जपानमा रोजगारी लगाईदिने भन्दै गुरुप्रसाद चालिसेले एक एक लाख मागेपछि …
वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन, माघ मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने
January 3, 2019	भिडियो, व्यापार, समाचार 0
निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्षपछि रेशम चौधरीले सांसदका रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । डिल्लीबजार कारागारबाट स–सम्मान ल्याएर चौधरीलाई ‘माननीय’को बैधता दिएर फेरि स–सम्मान कारागार नै फर्काइएको छ । कैलालीको टीकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्तका रुपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई राजनीतिक कारणले सांसदको सपथ गराउनु पर्ने बाध्यता परेको …
ख्रिष्टीयन धर्म प्रचारमा सरकार, सरकार भन्दा एकनाथ ढकाल शक्तिशाली ! – ( भिडियो सहित )
November 30, 2018	भिडियो, व्यापार, समाचार 0
ख्रिष्टीयन धर्म प्रचारमा सरकार, सरकार भन्दा एकनाथ ढकाल शक्तिशाली ! – POWER NEWS
मिठाईमा अखाद्य बस्तु मिलाउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा – ( भिडियो सहित )
November 6, 2018	भिडियो, व्यापार, समाचार, स्वास्थ्य 0
तिहार मिठाईको पनि पर्व । झिलीमिलीको यो पर्वमा मिठाईको उपभोग बढी हुन्छ । लक्ष्मी पूजा, म्हः पूजा र भाइटीकामा मिठाईको खपत अत्यधिक हुन्छ । चाडपर्वको मुखमा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तरीयतामा भने सधैं प्रश्न उठ्छ । तिहारका मिठाई चाहीँ कतिको स्वास्थ छ त ?
सल्यानमा व्यवसायीक घाँस खेती सुरु गरिएको छ ( भिडियो सहित ) – NEWS24 TV
October 20, 2018	भिडियो, व्यापार, समाचार 0
सल्यानमा व्यवसायीक घाँस खेती सुरु गरिएको छ । मध्यपश्चिम मात्र होइन, पूर्वी नेपालसम्म सल्यानका घाँस विक्रि हुने गरेको छ । अन्य कृषि उत्पादनभन्दा घाँसले बजार पाउन थालेपछि यहाँका किसान घाँस खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन् ।
उत्पादन बढाउन पशु–पन्छीलाई दिइने औषधिको असर अन्नतः मानव स्वास्थ्यमा – ( भिडियो सहित )
October 19, 2018	भिडियो, व्यापार, समाचार 0
व्यापारिक नाफाका लागि पशु–पन्छीको छिटो बृद्धि–विकास गराउन ‘ग्रोथ हर्मोन’लगायतका औषधि दिनु सामान्य भइसकेको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । पशुलाई दिइएको त्यस्तो औषधि दुध, मासुमार्फत मानव शरीरमा प्रवेश गर्दा सामान्य रोग लाग्ने वित्तिकै ‘एन्टिबायोटिक’ प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ । दुध बढाउन गाइ–भंैसीलाई दिइने ‘अक्सिटोसिन’ले …